Kunonoka-padanho repasi rose denda rekufamba nendege richava rine hutsinye
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Kunonoka-padanho repasi rose denda rekufamba nendege richava rine hutsinye
Airlines • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • nhau • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Kudzoka pane imwe ndege mushure me COVID-19 zvakafanana nekudzidzira kubhururuka zvakare.
Remangwana rekubhururuka harizove rakafanana, uye vamwe vanoti kufamba kuchave noutsinye.
Nguva dzose vanobhururuka vese vakasangana nehasha nekushungurudzika kwekunamirwa patara. Nevanhu zvakare kutora kumatenga "ane hushamwari" muhuwandu hukuru, kunonoka zvakanyanya kupfuura zvakajairwa zvinotarisirwa.
Kubhururuka kwawaitarisira kuve maminetsi makumi mashanu nemashanu kunoshanduka kuita chibhakera-kuzunza maawa mazhinji rwendo. Sezvo mamiriro ari mundege anoenda kubva pakuipa achienda pakuipisisa, vanhu vanowanzo shamisika "Izvi zviri pamutemo here?"
Mhinduro iyo iwe yausingade kunzwa ndeyekuti tara yako inobata ingangove iri pamutemo uye, kune ramangwana rinotarisirwa, matare anogona kunge achida kupa mukana kune mamwe ndege kupfuura zvavaizowanzoita pasi pemutemo.
Dhipatimendi rekutakura reU.S. (DOT) rine mitemo mitsva pamusoro pekuti ndege inobvumidzwa kugara patara kwenguva yakareba sei uye pasi pemamiriro api. Kugadziriswa kwemitemo yetara iyi kwakatanga kumashure mu2016 uye kwakatanga kushanda chete gore rino. Saka hapana mutemo wekuchinja wakakurudzirwa nedenda.
Hazvina mhosva kuti ndege ndeipi, kunyangwe iri mutakuri weUS- kana wekunze, nendege yekumba inogona kugara patara pasina anopfuura maawa matatu. Kune dzendege dzenyika dzese, muganho maawa mana.
Panofanirwa kuve nechiziviso chimwe chetara tara pamaminetsi makumi matatu. Zvino, pamaawa maviri, iyo mitemo inotaura kuti vafambi vanofanirwa kupihwa mvura, chikafu, uye kurapwa mune ndege kana zvichidikanwa. Iko zvakare kune zvinodiwa kuti dzimba dzekugezera dziri mundege dzinoshanda zvizere.
Chekupedzisira, kana iwo matatu / mana-awa mamaki arova, vafambi vane mvumo yepamutemo yekusiya ndege. Kazhinji, kana izvi zvikaitika, nendege inongomiswa nekuda kwekuwedzera kunonoka (sekudikanwa kwekubvisa mabhegi akaongororwa uyezve nevashandi vanoshanda panguva yakaoma vangamuka).
Tichifunga kuti uku ndiko kufamba nendege, hongu, kune zvisirizvo. Chinozivikanwa ndechekuti mutyairi anofunga kuti ndege inoda kugara patara nekuda kwezvikonzero zvekuchengetedza. Zvakakoshawo kuti vafambi vanzwisise kuti tara yekunonoka wachi inotanga chete kana iwe usingakwanise kusiya ndege. Kana iwe ugere pagedhi, musuwo wakavhurika uye vafambi vanogona kubva mundege, wachi haisati yatanga.
Adriana Gonzalez, gweta reFlorida, rinotiyeuchidza kuti kunyangwe uko ndege dzingangonzwa kuti dziine zvikonzero zvine musoro zvekuwedzera kunonoka kwetira, hatifanire kukanganwa nyaya yakanyanya kukosha pano:
“Ndege dzingangoti dzinosangana nezvose zvinodiwa zviri pamutemo taraac hold ichave, mune inoshanda pfungwa, yakaoma kwazvo, sezvo ivo vari kudzora kumashure mu - nendege sevhisi panguva yedenda. Ndege dziri kuzoda kuve dzinochinja-chinja mukupindura kune vafambi vari mukutambudzika uye vanoda kusiya ndege nguva isati yasvika iyo mitemo yakajairwa yetarac yaizoshanda. Utano nekuchengeteka kwevatakuri kunofanirwa kuuya pakutanga nguva dzose. ”
Kubva pakuona kweiyo ndege, zvave kuomarara kumhanya nendege imwe neimwe. Haisi chete njodzi yakawedzera kune - muvashandi vekufamba-famba mukabhini nekuita sevhisi yenguva dzose, iko kukanganisa mune cheni yekutengesa. Kwete zvese zvinopihwa pendege muuwandu hunodikanwa zviri nyore nhasi sezvazvaive pakutanga kwegore ra2020. Nepo vafambi vemhepo vachizoda kuchinjika apo izvi zvinopa zvinhu zvinokanganisa chete zvinhu zvakanaka kuva nazvo (senge zvinowanzo sarudzwa snacks kana kuti ndege dzinopa doro mukubhururuka), icho chinhu chisingambofa chakabairwa kuchengetedzeka.
Kunonoka kwese kwetara mune yakanakisa yenguva inoona iyo inboard nharaunda ichiwedzera kunetseka mupfungwa nguva yega yega ndege iri pasi. Kuenda kubva kune vanofamba vachidedera nekushungurudzika kuita mitambo uye kuva nemamiriro ezvinhu asina kugadzikana mubhodhi chinhu icho ndege dzinofanirwa kunge dzichiziva uye dzichinzwisisa pamusoro pemwedzi mishoma inotevera. Sezvo isu tese tichiedza kujairira kufamba nendege zvakare, ndege dzendege hadzifanirwe kungoteedzera mirau yese yakagadzirirwa kuchengetedza vafambi asi kutadza kudivi rekuzvipfuura.